अमेरिकास्थित भुटानिज नेप्लिज चर्चेज अफ अमेरिका (विएनसिए)ले यही जुलाई २७ देखि २९ सम्म एटलान्टा जर्जियामा नेपाली–भुटानी चर्चहरुको विशाल सम्मेलन ‘विएनसिए समिट–२०१७’ भव्यरुपमा आयोजना गर्दैछ । यसै सम्वन्धमा तुरही न्यूजका लागि कुमारसिंह विष्टले विएनसिएका अध्यक्ष पास्टर नर्बु तामाङज्यूसँग समिटका वारेमा गरिएको अन्तर्वार्ताः
विएनसिए समिट २०१७ आउन अब केही दिन मात्र वाँकी छ तयारी कस्तो छ ?
अमेरिकामा भएका भुटानी–नेपाली मण्डलीहरुको विएनसिए समिट एक महत्वपूर्ण सम्मेलन भएको हुनाले यो समिटले हाम्रा मण्डलीहरुमा ठूलो अर्थ राख्छ । यो समिट सफल र आशिषेमय वनाउनको लागि केही महिनादेखि हाम्रा मण्डलीहरु तन, मन र धनका साथ लागि परेका छन् । अहिलेसम्म परमेश्वरको अनुग्रहमा सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगी सकेको छ । हाम्रा जर्जिया एटलान्टाका होस्ट मण्डलीहरु केही दिनदेखि धेरै सक्रिय भएर लागि रहेका छन् । सम्मेलन ऐतिहासिक र आशिष्मय हुनेछ ।
यस वर्ष यो समिटमा अमेरिकाका कति वटा चर्चहरु सहभागी हुँदैछन् ?
यसै अनुमान लगाउन त कठिन होला तर पनि अमेरिकाका विभिन्न स्टेटबाट यस वर्षको समिटमा पचासभन्दा बढि चर्चहरुको सहभागिता रहने विश्वास लिएका छौँ हामीले ।
विएनसिए समिट हरेक वर्ष आयोजना गर्नुको उद्देश्यचाहिँ के हो ?
हामी यहाँका प्राय सबै मण्डलीहरु अमेरिकी परिवेशमा व्यस्त हुन्छौँ। यस्तो व्यस्त देशमा कमसे कम वर्षमा एक पटक भएपछि हाम्रा मण्डलीहरु भेटघाट गर्नुपर्छ, एकाअर्कामा संगति गर्नुपर्छ, एकअर्काको आशिष् बाँड्ने चौतारीको रुपमा मात्र नभई यो सम्मेलन दर्शनको आदान प्रदान गर्नको लागि पनि विएनसिए समिट आयोजना गर्ने गरिएको हो ।
यो सम्मेलनको विशेषता के हो ?
हामी अमेरिकामा भएका नेपालीभाषी चर्चहरु वेग्लावेग्लै पृष्ठभूमि, सम्प्रदाय र सिद्धान्तहरुबाट भएपनि वर्षमा तीन दिन सँगै येशू ख्रीष्ट प्रभुको चरणमा संगति गर्ने अवसर मिल्छ । नयाँनयाँ विश्वासी जनहरुसँग भलाकुसारी, चिनजान, नेटवर्क, संगति गर्ने अवसर प्रदान गर्नु नै यो विएनसिए समिटको विशेषता हो ।
यत्रो विशाल सम्मेलन आयोजना गर्न खर्च कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ?
यो सम्मेलनको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चपानी पूरै स्थानीय मण्डलीहरुबाट नै उठ्छ । अनि अर्को कुरा प्रत्येक सहभागीको लागि निश्चित दर्ता शुल्क तोकिएको छ, सम्मेलन स्थलसम्म आइपुग्न व्यक्ति आफैले यात्रा खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्छ र सुत्नको लागि पनि आफ्नो बन्दोवस्त आफै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ताखालका सम्मेलन आयोजना हुनु किन आवश्यक ठान्नुहुन्छ तपाई ?
हाम्रा नेपालीभाषी मण्डलीहरुमा भेटघाट, मेलमिलाप, संगति, दर्शनको आदान–प्रदान गर्न नै यस्ता खालका सम्मेलन आयोजना हुन आवश्यक ठान्छु ।
मण्डली जागृतीमा यस्तो सम्मेलनले ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?
राम्रो प्रश्न गर्नु भयो कुमारजी । अवश्य पनि यस्ता खालका सम्मेलनले स्थानीय मण्डलीमा जागृती ल्याउनमा अहम् भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
सम्मेलन शुरु हुन केही दिनमात्र बाँकी छ, सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिकाका विभिन्न स्टेटका चर्चहरु कत्तिको उत्साहित भएको पाउनु भएको छ ?
विएनसिए समिट अमेरिकामा भएका भुटानीनेपाली चर्चहरुको छाता संगति भएको हुनाले प्रायः स्टेटका मण्डलीहरु निकै उत्साहित देखिएका छन् ।
तपाईको नेतृत्वमा पहिलो पटक विएनसिए समिट लिड गर्दै हुनुहुन्छ, यो समिट कत्तिको सफल हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
प्रभु येशूको अनुग्रह र विएनसिए कार्यकारी सदस्यहरु र विएनसिए परिषद् पत्येक सहकर्मीको साथ, सहयोग र समर्थन अनि सम्पूर्ण पास्टरहरु तथा मण्डलीका सदस्यहरुको समर्पण र प्रार्थनाको कारण यो सम्मेलन सफल हुनेमा म तथा हामी कार्यकारी समितिका पदाधीकारीहरु विश्वस्त छौ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा म धेरै ठूलो भिड्को अपेक्षा राख्दिन तर धेरै मानिसहरुको ठूलो भिड्ले मात्र सम्मेलन सफल हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छुइन तर सफल भन्दा पनि हामी आशिषित् हुनेछौं भन्ने कुरामा भने म विश्वस्त छु । । म यो विएनसिए समिट २०१७ सफल भन्दा पनि आशिष्मय होस् भन्ने चाहान्छु ।
गत वर्ष भन्दा यस वर्ष यो समिटमा फरक के हुदैंछ ?
व्यवस्थापन अति चुस्त र छरितो हुनेछ । अगुवाहरुलाई सेवाकाइ गर्न अनुमति पत्र वितरण हुदैछ । विभिन्न वर्षमा प्रभुमा बिश्राम लिएकाहरुलाई सम्झेर सामुहिक स्मृति सभा हुनेछ, थिओलोजिकल आध्ययन सक्नेहरुलाई सम्मानको कार्यक्रम हुनेछ भने समिटमा नेपालकी लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्त र अमेरिकाका लोकप्रिय गायक सन्तोष तिर्वा एक वेलुकी विभिनन गीतहरु प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भने एक दर्जन जस्तो बिबिध बिषयमा साना–साना झुण्डमा गोष्ठि संचालन पनि गरिनेछ ।
अमेरिकामा भएका सवै नेपालीभाषी भुटानी नेपाली चर्चहरु विएनसिएमा किन समेटिदैनन् ?
हाम्रो दर्शन भनेको भजन संग्रह १३३ः१ को आधारमा मिलेर बस्नु हो । तर बिबिध साम्प्रदायीक शिक्षाहरु, अगुवाहरुको व्यक्तिगत अन्तरद्वन्दको कारणले होला वा व्यक्तिगत अहमले होला सबैलाइ एकै थलोमा अट्न गाहे भएको होला । तर हाम्रो प्रयास जारी छ हामी सवै समिटमा अटाउनु पर्छ भन्ने कुरामा ।
यो समिट प्रभुको उपस्थितिमा आशिष्मय प्रकारले सम्पन्न हुनको लागि देशविदेशका प्रभुका जनहरु सबैले आफ्नै दाजुभाई दिदीवहिनी सम्झेर हामीलाई प्रार्थनामा याद गरि दिनु होला । हामीले जे गर्दैछौ यसबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्यमा ठूलो वृद्धि आएको होस् । हाम्रो यो सम्मेलनले प्रभुलाई मात्र महिमा भएको होस् भन्न चाहान्छु ।